Fanamarihana momba ny fandefasana - Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd.
Fampandrenesana alohan'ny baiko:
(1) Misy ampahany: Module LED, tariby famantarana eo anelanelan'ny modules, tariby misy herinaratra eo anelanelan'ny modely sy ny famatsiana herinaratra.
(2) Mividiana modules mitovy andiany: mba hisorohana ny tsy fitovizan'ny famirapiratana sy ny loko amin'ny efijery tokana dia tsy maintsy mividy modules amin'ny andiany iray ihany ianao. Izany hoe tsy maintsy mividy ny modules amin'ny efijery tokana ianao amin'ny alàlan'ny baiko iray avy aminay.
(3) Caution: Ny maodelin'ny LED tsy afaka ampiasaina ho toy ny faritra hafa amin'ny fampisehoana LED taloha. izahay aza manolotra fanampiana ara-teknika na serivisy raha nampiasa ny maodelin'ny LED izahay hanoloana ny maody LED efa taloha.
(4) Tariff: ny vidinay dia tsy misy sarany na haba any amin'ny toerana halehany, tokony hanafatra ny fadin-tseranana ianao ary handoa ny haba sy ny haba any an-toerana.
1. Ny vidin'ny singa amin'ireo entana dia tsy misy ny vidin'ny fandefasana. Azonao atao ny manamarina ny vidin'ny fandefasana amin'ny pejy fiantsenana rehefa misafidy ny habetsaky ny entana sy ny toerana halehanao.
2.DHL express no fomba mahazatra. Ny hafa toa ny EMS, UPS, FedEX ary TNT dia horaisina raha tsy tsy misy ny DHL na tsy mety amin'ny toerana alehany; Raha te handefa ny entana amin'ny alàlan'ny ranomasina na amin'ny rivotra ianao, dia mifandraisa aminay raha mila antsipiriany.
3. Hanohy ny kaontinao izahay ao anatin'ny 2 andro fiasana aorian'ny nahazoana vola. Hampahafantatra anao iray hafa ny daty fandefasana haingana indrindra izahay raha lany ny entana.
4. Ny adiresy voamarina ihany no alefanay any amin'ilay baiko. Ka ny adiresinao dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny adiresy fandefasana. Azafady mba hamafiso ny adiresy fandefasana ao amin'ny kaontinao rehefa mandoa an'i Wester Union na olon-kafa ianao.
5. Ny fotoana fandefasana entana dia omen'ny mpitatitra ary manilika ny faran'ny herinandro sy ny fialantsasatra. Mety hiovaova ny fotoana fitaterana, indrindra amin'ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra.
6. Azafady mba ampahafantaro anay raha te hampidina ny sandan'ny vokatra amin'ny faktiora fandefasana ianao mba hisorohana na hampihenana ny adidin'ny fadin-tseranana eo anilanao. Raha tsy izany dia hampiasainay ny vola tena izy rehefa voaloa.
7. Raha ilaina dia ampianaro ny mpandefa iraka amin'ny fanampiana ilaina momba ny fanadiovana ny entana eo an-toerana.
8. Azafady zahao ireo zavatra eo alohan'ny mpampita hafatra rehefa tonga izy ireo. Raha simba ny entana dia andramo azafady ny porofo fanadihadiana ataon'ny mpampita hafatra ao an-toerana momba ny fahavakisan'izany fotoana izany, azafady mba andefaso mailaka izahay miaraka aminay miaraka amin'ny sary na horonantsary fonosana sy vokatra faran'izay haingana.
9. Raha mbola tsy nahazo ny fandefasana anao ianao tao anatin'ny 15 andro hatramin'ny daty fandoavam-bola dia mifandraisa aminay. Hanaraka ny fandefasana izahay ary hiverina any aminao indray.
10. Ireo vokatra nasaina dia tsy hankafy ny fiverenana sy ny fiantohana raha toa ka rovitra ny kaody.
11. Manome fiantohana kalitao mandritra ny roa taona izahay ho an'ny ankamaroan'ny vokatra amidinay (ny fehezan-teny manokana dia iharan'ny fakany Proforma farany.).Raha misy lesoka amin'ny fampiasana mahazatra mandritra io vanim-potoana io dia hanamboatra na hisolo maimaimpoana ao amin'ny orinasa izahay. Tompon'andraikitra amin'ny fandefasana entana ny mpanjifa.